Chadwick Boseman: kintana mainty panther nalevina tany Belton, South Carolina - teles relay
Chadwick Boseman: kintana mainty panther nalevina tany Belton, South Carolina
Chadwick Boseman dia nalevina tao amin'ny toeram-pandevenana fiangonana Welfare Baptist Church any Belton, South Carolina, kilaometatra vitsivitsy monja miala ny tanànany any Anderson.
Manamarina izany ny taratasim-pahafatesana azon'i E! News. Ny fandevenana ilay mpilalao dia natao ny 3 septambra enina andro taorian'ny nahafatesany tao an-tranony tany Los Angeles noho ny homamiadan'ny valanaretina.
Ny taratasy fanamarinana dia milaza ihany koa fa ny kintana Black Panther dia nanana colectomy tamin'ny taona 2016. Nisy ny fandidiana faharoa tamin'ny volana martsa 2020 rehefa nifanintona ny homamiadana.
Ny fihetsiketsehana nanova an'i Nizeria mandrakizay
Manaiky ny fifandraisana amin'i Israely i Sodana, hoy i Trump
Taorian'ny fanjavonan'i Chadwick Boseman dia nifanaraka ny fanomezam-boninahitra, indrindra ny avy amin'ny mpilalao Black Panther. Andro vitsy lasa izay dia i Lupita Nyong'o no nipoitra avy tamin'ny fahanginana na dia toa tsy tena hitany aza ny fanjavonan'ny sakaizany.
“Manoratra ireto teny ireto avy amin'ny toerana tsy misy antenaina aho hanomezam-boninahitra lehilahy iray manantena fanantenana. Sahirana aho mieritreritra sy miresaka momba ny namako, Chadwick Boseman, tamin'ny lasa teo. Tsy misy dikany izany. Ny fanambarana ny fahafatesany dia toy ny totohondry ao anaty vavony isa-maraina ”, hoy izy nanoratra tao amin'ny lahatsoratra Instagram nahavaky fo.
Ho an'ny #ChadwickBoseman malala. #TakeYourTimeButDontWasteYourTime
Lahatsoratra iray nozarain'i Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) tamin'ny 8 Sep 2020 amin'ny
Chinde 839 Lahatsoratra 0 hevitra
Fandripahana tany Rwanda: Félicien Kabuga dia niresaka momba ny fitsarana iraisam-pirenena
Amin'ny 45, Vanessa Paradis dia maneho musculature mahavariana - Video
Vaovao momba ny fanafihana Kumba!